Home Wararka Nin la sheegay in uu ka tirsanaa ciidanka amniga Deyniile oo la...
Nin la sheegay in uu ka tirsanaa ciidanka amniga Deyniile oo la dilay
Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya degmada Deyniile, Ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee ku sugan degmada Dayniile ee gobolka Banaadir ayaa saacadihii lasoo dhaafay iska horimaad waxa ay ku dileen nin hubeysnaa oo la sheegay inuu dhac ka geystay qeybo ka mid ah degmadaasi.
Ninka hubeysan ayaa la dheegayaa in uu xirnaa tuutaha ciidamada milatariga Soomaaliya, isla-markaana uu dhac u geystay dhalinyaro ku sugneyd xaafadda Siisii oo ka tirsan Dayniile, waxaana dhalinyarada oo laga qaatay Moobeello ay wargeliyeen saldhigga Booliska degmadaasi oo durbo ciidan u diray halkaasi, kuwaasoo toogtay ninkii hubeysnaa.
Inta aan la dilin ninka hubeysan ayaa ciidamnada ugu tageen guri ku yaalla xaafaddaasi, isaga oo isku dayey inuu is-difaaco, waxaana ciidamadu ay markii dambe ku dileen fal toogasho ah, sida ay in noo sheegeen qaar ka mid ah dadka degaanka. Sidoo kale ciidamada ayaa la wareegay Moobeelladii la sheegay inuu soo dhacay ninkaasi, iyadoona kadib meydkiisa la geeyey xarunta hay’adda dambi baarista ee CID-da.
Previous articleGabar yar oo in mudo ah la’laa oo maanta iyada oo meyd ah la helay
Next articleGudiga doorashooyinka Somaliland oo ka hadlay tirinta codadka & ilaalinta sanaaduuqaha
Laba qof oo ku dhimatay bannaanbaxyo ka dhacay dalka Kenya
Kalafadhiga 5aad ee Aqalka sare oo Maanta la furaayo!!